Umnxeba woCinezelo ngeTotshi yeFektri - Abenzi baseTshayina Abalulathisi ngeTotshi, abaXhasi
I-KLL ngombala otyheli oguqukayo, ityhubhu yobhedu, ityhubhu yokugoba ye-SS, ucinezelo lwencwadi, ukuvala isilinda okhethekileyo ukuthintela ukuvuza, Sebenzisa imikhono yokunciphisa ubushushu kunye nezihlanganisi zazo. Faka isicelo sokufaka i-microwelding inbolving-welding, i-silver-welding, i-tin-welding kunye ne-ornament processing. Ukufakela, ukuwelda, unyango lwe -faceface kunye nokufudumeza kwendawo kumasifundisane, igaraji kunye nelebhu. njl. sebenzisa i-easliy efumanekayo isilinda segesi njenge-fuel source, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lokushisa ukuya kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yokuCoca i-Torch-7013D
I-Brass knot knot, umzimba wobhedu, ucinezelo olwenziweyo, ukukhanya okulula, ilangatye eliguquliweyo elinokusetyenziswa, ukutshisa ubushushu kutshabalalisa isigxina iseli yesityalo, ikakhulu kusetyenziswa ukugoba imibhobho ukubumba, ukusetyenziswa kwangaphandle, imibhobho yokumisa kunye neminye imisebenzi yokutywina, ukutywina i-PVC kunye nokuthengiswa kwangaphambili. Unxibelelwano, ukutshisa ii-BBQ kunye nemililo njlnjl, sebenzisa i-easliy efumanekayo isilinda segesi ebutane njengomthombo wombane, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL ngombala otyheli oguqukayo, ityhubhu yobhedu enenkanyamba ngaphakathi, ngentonga kunye nokuhamba, ucinezelo olwenziweyo, ukuvala isilinda okhethekileyo ukuthintela ukuvuza, Sebenzisa imikhono yokuncipha ubushushu kunye nezihlanganisi zazo. Faka isicelo se-microwelding inbolving copper- welding, i-silver- welding, i-tin-welding kunye ne-ornament processing. Ukufakela, ukuwelda, unyango lwe -faceface kunye nokufudumeza kwendawo kumasifundisane, igaraji kunye nelebhu. njl. sebenzisa isilili yebutane efumanekayo njengesixhobo sokufumana umbane, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
Umzimba wobhedu onamaqhina anokuhlengahlengiswa we-ss, ucinezelo olwenziweyo, ukukhanya okulula, ulawulo lwedangatye oluhlengahlengisiweyo kunye nokuzibetha. Uyilo lwe-Ergonomic yokubamba ngokukhululekileyo esandleni. Inokulungiswa kwitanki ye-butane, enokuthi ithathe indawo yayo, ukusetyenziswa komjikelo kulunge nokusingqongileyo.
Ilungele irestyu, indlu, ipikniki, intaba, inkampu kunye neminye imisebenzi yangaphandle.
I-KLL-Incwadana yemigaqo yokuCoca iTotshi-7023C
umzimba wobhedu onamaqhina e-adjustable ss, ucinezelo olwenziweyo, ukukhanya okulula, ulawulo lwedangatye oluhlengahlengisiweyo kunye nokuzibetha. Uyilo lwe-Ergonomic yokubamba ngokukhululekileyo esandleni. Inokulungiswa kwitanki ye-butane, enokuthi ithathe indawo yayo, ukusetyenziswa komjikelo kulunge nokusingqongileyo.